ထိုးစစ်တွေရပ်ပေးဖို့ သမ္မတကြီးထံ တင်ပြမည်
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ဖိတ်ကြားချက် အရ နေပြည်တော်ကို ထွက်ခွာသွားတဲ့ KNU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ပွဲများ ရပ်ဆိုင်းရန်နဲ့ အဓိပ္ပယ်ပြည့်ဝတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ရေး အတွက် ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ ဒီကနေ့ ဇန်နဝါရီလ ၃ရက်နေ့မှာ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
၁၅ ကြိမ်မြောက် ကေအဲန်ယူ ညီလာခံက ရွေးချယ်လိုက် တဲ့ ကေအဲန်ယူ ဗဟိုခေါင်းဆောင်တွေကို တွေ့ရစဉ်
လက်ရှိကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပွဲများရပ်ဆိုင်းရေးမှာ အစိုးရထိုးစစ်များ ရပ်ဆိုင်ရေးဘို့ အရေးကြီးကြောင်း ထိုးစစ်တွေကြောင့် ယုံကြည်မူတည်ဆောက်ရေးကို အကန့်အသတ်ဖြစ်စေတယ်လို့ နေပြည်တော်ကို လိုက်ပါသွားတဲ့ KNU တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး(၂) ပဒိုမန်းမန်းက ပြောပါတယ်။
KNU အဖွဲ့အနေနဲ့ အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ ကေအင်ယူတဖွဲ့တည်းအနေနဲ့ ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ဘဲ တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့ သဘောဆန္ဒကိုထုတ်ဖေါ်ခွင့်ရမဲ့ ညီလာခံပုံစံမျိုးဖြစ်အောင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို တင်ပြဘို့ရှိတယ်လို့ ပဒိုမန်းမန်းကပြောပါတယ်။
ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှာ KNU ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမူတူးစေးဖိုး၊ အတွင်းရေးမှူး ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း၊ တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး(၂) ပဒိုမန်းမန်း၊ အလုပ်အမူဆောင်အဖွဲ့ဝင် မန်းငြိမ်းမောင်၊ ဗဟိုကော်မတီဝင် ပဒိုစောလှထွန်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
KNU တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး(၂) ပဒို မန်းမန်းကို RFA ဝိုင်းတော်သား ဦးတင်အောင်ခိုင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ ကရင်လူထု နဲ့ ကေအဲန်ယူ တွေ့ဆုံမည်
စစ်သားများ စစ်တန်းလျား ပြန်ကြပါ
ကျန်တဲ့တာဝန်ရှိဘူများနဲ့ ဆွေးနွှေးရင် အားလုံး အဆင်ပြေမှာပါ
B. Ed. Kappiya
PEACE.....You know...I know...Even kids know....PEACE. U Thein Sein also knows PEACE..The symbol of PEACE has TWO fingers .U Thein Sein..Please do not let the fore finger down. It is isolated finger. What does it mean ? You know...I know...Even kids know...U Thein Sein should know......You love PEACE, I love PEACE, We love PEACE. That means we all love TWO fingers.
Jan 04, 2013 03:36 AM
ပြည်တွင်းစစ်ကမဖြစ်တာပဲကောင်းပါတယ် စစ်ဖြစ်ရင်ပြည်သူတွေနစ်နာမယ် ပြည်သူတွေနစ်နာရင် တိုင်းပြည်မတိုးတက်နိုင်ပါဘူး
Jan 03, 2013 07:38 PM
I am Karen. I don't think this delegation represents the attitude of the Karen people asawhole. Although the ordinary Karens are honest and value friendship, most leaders in Karen organizations are corrupt and they don't mind trading Karen people's lives and handing the Karen state over to Than Shwe's liar protege Thein Sein. They have not learned the lectures given by the Burmese Army over the course of 60 years. How many times the successive Burmese army leaders have lied! They are just going to the Naypyi Daw to be anointed. Ha! Ha! Ha!
Jan 03, 2013 12:14 PM